Colblindor ကဘာလဲ? - Iris က💡💻 - မျက်လုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်အပြာရောင်အလင်း Filter ကို🛌👀
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးစံ mode မှာအရောင်များကိုကြည့်ဖို့နိုင်စွမ်းမပါသောအခါအရောင်ကန်းများသောအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်.
ဆဲလ်များ၏နှစ်ဦးစလုံးအလင်း detect လုပ်ဖို့အသုံးပြုကြသည်. ဤရွေ့ကားကိုခေါ်တစ်မျိုးကတော့နှင့်ချောင်းဟုခေါ်ကြသည်. အဆိုပါချောင်းသာမှောင်မိုက်ခြင်းနှင့်အလင်း detect နှင့်အနိမ့်အလင်းလေယာဉ်အလွန်တုံ့ပြန်မှုများမှာ. အဆိုပါကန်တော့ချွန်ဆဲလ်တွေအရောင် detect လုပ်ဖို့အသုံးပြုကြသည်.
ဤရွေ့ကားဆဲလ်သင့်ရဲ့ရူပါရုံကို၏ဗဟိုအတွက်အာရုံစိုက်နေကြတယ်. ယေဘုယျအားဖြင့်, အရောင်မြင်သောတစ်မျိုးကတော့အမျိုးအစားသုံးမျိုးရှိပါတယ် i.e. စိမ်းလန်းသော, အပြာနှင့်အနီ.
ဦးနှောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရောင်အမြင်တည်ထောင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ထိုအကန်တော့ချွန်ဆဲလ်တွေဆီက input ကိုအသုံးပြုသည်.
အရောင် sightlessness များသောအားဖြင့်တစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ဦးထက်ပိုအရောင်ကန်တော့ချွန်ဆဲလ်ပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်သည့်အခါဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်, စံထက်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင် detect သို့မဟုတ်စနစ်တကျအလုပ်လုပ်ကြသည်မဟုတ်.
အားလုံးသုံးကန်တော့ချွန်ဆဲလ်လက်မှာပေမယ့်ကန်တော့ချွန်ဆဲလ်များထဲမှတစ်ဦးသင့်လျော်သောလမ်းအတွက်အလုပ်မလုပ်သောအခါအဆိုပါပျော့အရောင် sightlessness ဖြစ်ပေါ်.
ကလေးတွေငယ်ရွယ်အခါအရောင်ကန်း၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုမကြာခဏမိဘများအားဖြင့်ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်. အချို့ကိစ္စများတွင်, လက္ခဏာများသူတို့ပင်သတိပြုမိမကျမည်အကြောင်းဒါအနည်းငယ်ရှိပါတယ်.
အရောင် sightlessness ၏ကွဲပြားခြားနားသောအကြေးခွံရှိပါတယ်. အပျော့စားအရိပ်မလုံလောက်အတူလူတွေကောင်းသောအလငျး၌ယေဘုယျအားဖြင့်အရောင်များကိုရိပ်မိပေမယ့်အားနည်းအလင်း၌ရှုပ်ထွေးရှိနိုင်ပါသည်.
အခြားသူများကိုမဆိုအလငျး၌အချို့အရောင်များခွဲခြားလို့မရပါဘူး. အရောင် sightlessness ယေဘုယျအားဖြင့်အတူတူပင်လမ်းအတွက်နှစ်ဦးစလုံးမျက်စိအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အသက်တာကိုတဆင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေဆဲ.
သငျသညျ colorblindness ၏ဒီဂရီအကြောင်းပိုမိုသိလိုပါလျှင်, conduct the Vision test available at https://iristech.co/test-vision.
မျက်မှန်နှင့်အဆက်အသွယ်မှန်ဘီလူး၏အထူးကြင်နာအရောင်ချို့တဲ့ကိုကူညီကွဲပြားခြားနားသော filter များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေနဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာရရှိနိုင်ပါ, လိုအပ်မယ်ဆိုရင်.
Vision ၏ software ကိုအရောင်များကွဲပြားခြားနားသွားအတွက်အကူအညီဖြစ်စေနိုင်.
အရောင်ကန်း "အရောင်ကန်း" မဟုတ်ပါဘူး
Most of the people join the term color blindness to sightlessness and color, သောသူတို့အဘို့ကိုပြောတယ်, that if you are colorblind or colorblind then you can see only black and white or possibly grayscale pictures.
အရောင် Vision ၏ Deficiency
Vision ၏ https://iristech.co/vision/ will help you deal with the colorblindness deficiency you are suffering from. ဆော့ဖ်ဝဲကို download လုပ်ပါနှင့်ရှင်းလင်းစွာသင့်ရဲ့ screen ကိုကြည့်ရှု.
ဤအမည်သည်ယောဟနျသ Dalton အဖြစ်အမည်ရှိ 18 ရာစုသုတေသီကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်.
အဆိုပါသုတေသနပညာရှင် colorblind ခဲ့သည်. သူအချို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်များအတွက်သိပ္ပံနည်းကျစက္ကူအတွက်ဖြစ်ရပ်ဆန်းကရှင်းပြသည်.
အနီးကပ် cookie ကိုပေါ့ပ်အပ်
ဒီ website cookies များကိုအသုံးပြုသည်: ဒီ site browse ဆက်လက်အားဖြင့်သင်တို့ကိုဤမူဝါဒကိုလက်ခံ.